Man United , Arsenal Chelsea iyo Liverpool oo ku dagaalamaya saxiixa laacibka ugu wanaagsan Horyaalka Germany xilligan, yaa hogaaminaya?
Wednesday, December 19th, 2018 - 05:57:01
Saturday February 17, 2018 - 15:39:07 in Wararka by Hussein Hadafow
Arsenal ayaa noqotay kooxdii ugu dambeesay ee Premier League ka socota taasi oo xiiso u qabta laacibka qiimahiisa lagu qiimeeyay 50milyan u muujisay weeraryahaanka kooxda RB Leipzing Timo Wener. Sida laga soo xigtay saxaafada.
Weeraryahaankaan dhalliyaradda ah ayaa xulkiisa Germany u saftay 10-kulan. 16-gool ayuuna dhaliyay 29-kulan oo uu ciyaaray xili ciyaareydkaan.
21-sano jirkaan ayaa xili ciyaareydkii hore ku dhameestay kaalinta afaraad ee kala horeenta gool dhalinta horyaalka Bundesliga.
Werner ayaa hore waxaa uu dalabyo dhowr ah uu ka helay kooxaha Premuer League ee kala ah Chelsea. Manchester United iyo Liverpool. Balse The Sun ayaa warinaysa kooxda Gunners hadda in ay diyaar u tahay la wareegida wiilka Germany u dhashay.
Arsenal ayaa lagu soo waramayaa indho-indheeyaal daawada in ay u dirtay Werner kulankii kooxdiisa ee la ciyaartay Napoli. Timo ayaa lasoo warinayaa kooxdiisa inuu ka diiday qandaraas cusub inuu u saxiixo.